महरा प्रकरणबारे शेखर कोइरालाले भने: ‘कसैको राजनीतिक स्वार्थ हुनसक्छ’ - Birat Sandesh
महरा प्रकरणबारे शेखर कोइरालाले भने: ‘कसैको राजनीतिक स्वार्थ हुनसक्छ’
पार्टीभित्रैबाट हुन सक्छ ?
एउटा कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभमा आउनुपर्छ । किन भने सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पहल भएको छ । त्यसपछि डा. प्रकाशशरण महत पर्यटन मन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । बीआरआई भन्छौं हामी त्यो ग्रान्डमा बनाउने होइन । बीआरआई भनेको चाइनिज बैंकबाट लोन लिन्छ । कुनै पनि देश लोन लिएर बनाउने हो । हामीहरुले पनि लोन लिएर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पाँच खर्बको रेल ल्याउँदा हाम्रो गच्छेले भ्याउँछ भ्याउँदैन त्यो विचार गर्नुपर्छ । जहिले पनि लोन लिँदा देशको आर्थिक अवस्था हेरेर लिनुपर्छ । रेललाई प्राथमिकता नदिएर हजार मेगावाटको जलासाययुक्त हाइड्रो पावर एउटा, त्यपछि ट्रान्समिसन र किमाथान्कादेखि धरानसम्मको एक्सप्रेस सडक र रसुवागडीदेखि काठमााडौंसम्म एक्सप्रेस बनाउनुपर्छ । यी कुराको लागि नेपालले लोन तिर्न सक्छ । त्यो पनि पाँच वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र रेलमा जानुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०७६, शनिबार १६:५२
विरोधका लागि बन्दहड्ताल गर्नेहरुले यिनीहरूबाट सिक्ने कि ?
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज एचडब्लु बुसको निधन
यस्तो छ चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका
राष्ट्रियसभा बैठकः प्रमाण विधेयक, २०७५ पारित
देशभर अविरल वर्षा (कहाँ कति पानी पर्यो)
इटहरीका मेयरले आफ्नै घरको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काए
आज पनि भारी वर्षा हुने
‘सहमति गरेको कुरा नयाँ होईन, बेलुन बनाएर फुकिरहनुपर्ने आवश्यकत्ता छैन’ [अन्तर्वाता]
तरुण दलको प्रदर्शन, सडकबाटै सरकार ढाँल्ने चेतावनी
विजयादशमीको टीकाको साइत बिहान ९:५१ बजे
प्रदेश प्रमुखद्वारा बजेट अधिबेशन आव्हान